30,000 ton compound fatịlaịza mmepụta akara - YiZheng Arọ Machinery Co., Ltd.
Usoro nke mmepụta kwa afọ nke fatịlaịza 30,000 bụ ngwakọta nke akụrụngwa dị elu. Ọnụ ego dị ala na mmepụta arụmọrụ dị elu. Onyinye fatịlaịza mmepụta akara nwere ike ji mee ihe maka granulation dị iche iche mejupụtara ngwaọrụ. N'ikpeazụ, a ga-akwadebe fatịlaịza dị iche iche dị iche iche na usoro dị iche iche dị ka mkpa n'ezie si dị, mejupụta ihe oriri na-edozi ahụ nke ọma, ma dozie esemokwu dị n'etiti mkpa ihe ọkụkụ na ala.
1. Akụrụngwa bụ ọtụtụ ebe mgbanwe na adabara granulation nke onyinye fatịlaịza, na nkà mmụta ọgwụ, chemical ụlọ ọrụ, ndepụta na ndị ọzọ ngwaọrụ, na ngwaahịa granulation ọnụego dị elu.
2. Ihe ize ndụ nke mmepụta nwere ike ịmepụta ọtụtụ iche, gụnyere fatịlaịza organic, fatịlaịza na-edozi ahụ, fatịlaịza ndu, fatịlaịza magnet, wdg.
3. Obere ego, ọrụ magburu onwe ya. Factorylọ ọrụ anyị na-ere ma na-ere ya n'onwe ya dịka onye na-ere ahịa iji nye ọtụtụ uru ndị ahịa na ọnụahịa kacha mma. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ndị ahịa nwere nsogbu ọrụaka ma ọ bụ ajụjụ mgbakọ, ha nwekwara ike ịgwa anyị okwu n'oge.
4. Ngwakọta fatịlaịza mepụtara na ahịrị mmepụta a nwere obere olu mmiri na-amịpụta mmiri, ọ dị mfe ịchekwa, ọ dịkwa mfe karịsịa maka itinye ya n'ọrụ.
5. The dum onyinye fatịlaịza mmepụta akara na-akwakọba ọtụtụ afọ nke teknuzu ahụmahụ na mmepụta ikike. Nke a bụ usoro nrụpụta fatịlaịza na-arụ ọrụ nke ọma na nke na-adịghị ike nke emezigharịrị, gbanwee ma hazie ya, na-edozi nsogbu nke obere arụmọrụ na ọnụ ahịa dị elu n'ụlọ na mba ofesi.
Usoro usoro nke onyinye fatịlaịza na-emepụta ahịhịa nwere ike ịkewa n'ime: akụrụngwa akụrụngwa, ịgwakọta, granulation, ihicha, obi jụrụ, nhazi ọkwa, mkpuchi mkpuchi, na ngwugwu ikpeazụ emechara.
1. Ihe akụrụngwa:
Dika onu ahia ahia na mkpebi nke ala ala, urea, ammonium nitrate, ammonium chloride, ammonium thiophosphate, ammonium phosphate, diammonium phosphate, calcium buru ibu, potassium chloride (potassium sulfate) na ihe ndi ozo na-ekesa na oke. A na-eji ihe mgbakwunye na ihe ndị na-achọpụta ihe dị ka ihe ndị dị n'otu akụkụ site na akpịrịkpa belt. Dika usoro edeputara, ihe omuma ihe obula bu ihe ndi ozo site na eriri rue ndi ozo. Ọ na - achọpụta izi ezi nke nhazi ahụ ma mata ọfụma ma na - aga n'ihu ma na - arụ ọrụ nke ọma.
2. Ngwakọta agwakọta:
Kwụ igwekota bụ akụkụ dị oké mkpa nke mmepụta. Ọ na - enyere akụrụngwa aka ịgwakọta ọzọ ma na - atọ ntọala maka fatịlaịza granular na - arụ ọrụ nke ọma M na-emepụta otu igwe kwụ otu nkenke na axis kwụ ọtọ iji họrọ.
Granulation bụ akụkụ bụ isi nke usoro mmepụta fatịlaịza. Nhọrọ nke granulator dị ezigbo mkpa. Anyị factory arụpụta disk granulator, drum granulator, ala extruder ma ọ bụ ọhụrụ onyinye fatịlaịza granulator. Na nke a mejupụtara fatịlaịza mmepụta akara, anyị na-ahọrọ a rotary drum granulator. Mgbe agwakọtara ihe ahụ n'ụzọ zuru oke, a na-ebufe onye na-ebu eriri na Rotary drum granulation iji mezue granulation.
Mgbe obi jụrụ, powdery bekee-anọgide na na okokụre ngwaahịa. All mma na nnukwu ahụ nwere ike ekpuchi na anyị ala sieve. The ekpuchi ezi ntụ ntụ na-ebu site na belt ebu ka blender ịkpali ihe akụrụngwa ọzọ na-eme granulation; mgbe nnukwu ahụ na-adịghị izute urughuru ọkọlọtọ mkpa ka a ga-ebugharị site a yinye crusher tupu granulation. Emechara ngwaahịa a ga-ebuga ya na igwe mkpuchi mkpuchi fatịlaịza. Nke a na-etolite usoro mmeputa zuru ezu.
5. Nkwakọ ngwaahịa:
Usoro a na - ejide igwe nkwakọ ngwaahịa akpaka. Igwe ahụ nwere igwe eji arụ ọrụ akpaka, sistemụ ebufe, igwe akara, wdg. I nwekwara ike hazie hoppers dị ka ihe ndị ahịa chọrọ. Ọ nwere ike ịmata nkwakọ ngwaahịa ọnụ ọgụgụ nke nnukwu ihe ndị dị ka fatịlaịza na fatịlaịza na-edozi ahụ, ma jiri ya na ụlọ ọrụ nhazi nri na usoro mmepụta ihe.